အဘယ်အရာကိုပတ္တူပေါ်တွင်ရေနံပန်းချီကားကိုဝယ်ခြင်းငှါ: ထိပ်တန်း 20 ကောင်းသောဥပမာ
အဓိက » သတင်း » အတွင်းပိုင်းမှပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ရုပ်ပုံများအတွင်းပိုင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း, ဒါပေမယ့်အနုပညာဟာအလွန်ကြီးမားတဲ့ palette ရှိပါတယ်, ထိုသို့ဖွင့်အရောင်များကိုမရင့်, နှင့်စာအရေးအသားပန်းချီကားတစ်ဦးထုံးစံ၌, ပစ္စည်းများနှင့်စတိုင်. ထို့ကြောင့်ဝုဏ်ဘို့ပန်းချီကားများ၏ရွေးချယ်မှုသည်အလွန်ဂရုတစိုက်ကုသသင့်ပါတယ်နှင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဖို့အချိန်တစ်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏကိုပေးဆောင်ဖို့.
အထည်ရွေးချယ်တဲ့အခါ, သင့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ကိုနားထောင်, ပန်းချီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, သင်၏အိမ်သို့မဟုတ်ရုံး၏နံရံပေါ်မှာဆွဲထားတံ့သော, ကျနော်တို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့စွမ်းအင်ရှိရမည်. ကပ်ကြီးများ၏ပုံရိပ်များဆည်းပူးမနေသင့်, စစ်ပွဲများ, ဝမ်းနည်းခြင်း, သဘာဝဘေးအန္တရာယ်. နှင့်အခြားစည်းမျဉ်း: အထူးရေးရာပန်းချီနှင့်အတူတိုင်းအခန်းတက် Pick.
ဧည့်ခန်းများအတွက် Impressionist ပန်းချီကားများသို့မဟုတ်လှပသောရှုခင်းများကိုဝယ်ခြင်းငှါအကြံပြုသည်. Feng Shui ကျွမ်းကျင်သူများကသင့်ရဲ့ခံစားခကျြကိုနားထောငျဖို့အခန်းတစ်ခန်းမှအကြံပေး: သငျသညျလိုလျှင်, ဥပမာအား, အနီရောင်အရောင်ပန်းချီ, နံရံတစ်ခုပန်းချီဆွဲထားကာကြည့်ယူ - သင့်ကိုယ်သင်ခံစားရအဖြစ်, ပင်ကိုယ်ကပြောပါတယ်.
အိပ်ခန်း, ကအပန်းဖြေဖို့ယူဆသည်အဘယ်မှာရှိ, ကြွင်းသောအရာမှ, ရင်ခုန်စရာပုံရိပ်အကောင်းဆုံးတော်ပါတယ်အပိုင်းအစများ, ချစ်သူများသို့မဟုတ်လိင်မြင်ကွင်းများ.
မီးဖိုချောင်ဒါမှမဟုတ်ထမင်းစားခန်းထဲမှာစိတ်ရောကိုယ်ပါပတ္တူစမယုံနိုင်လောက်အောင်လျောက်ပတ်သည်, ပန်းပွင့်သို့မဟုတ်ရုပ်ပုံနှင့်အတူနေဆဲ Life အမျိုးမျိုးခြယ်သထားတဲ့. ဒါ့အပြင်အလှဆင်ပြားများနှင့်ပန်းအိုးအားဖြင့်အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့မွမ်းမံနိုင်ပါတယ်. အရောင်ကြောင့်, Feng Shui ဟုပြောဆိုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ, ဒါကြောင့်အစိမ်းရောင်၏မြင်သာထင်သာလိုအပ်သောကြောင်း, ရာသစ်သား၏ဒြပ်စင်ထောကျပံ့, သို့သော်ဤဥပစာကဤဘေးဥပဒ်ရန်ဖြစ်ပါသည်နှင့်များမှာ. ဒါပေမယ့်အနီရောင်ကြိုဆိုပင်ရှေ့မှောက်တွင်: ဤသည်အရောင်သင်္ကေတဟာအစာစားချင်စိတ်များနှင့်နေအိမ်ငါ့ကိုနှိုး.
လေ့လာမှုမှာကြည့်ဖို့လိုလျှင်, ဤနေရာတွင်သင်ကတောင်တော်ရှုခင်းမှအနီးကပ်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ပါတယ်, ရေစီးဆင်းမှု. အဆိုပါအရာဖြစ်ပါသည်, အရှေ့ကျွမ်းကျင်သူများကယုံကြည်ကြသည်, ထိုသို့သောပုံရိပ်တစ်ခုကသူတို့ကိုစည်းစိမ်နှင့်ကောင်းသောကံကြမ္မာပိုင်ရှင်တွေဆောင်ခဲ့ဦးမည်.
သားသမီးရဲ့အခန်းဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များထဲကနေဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုအလှဆင်ဖို့အကြံပြုသည်, တိရိစ္ဆာန်များ, ငှက်တို့သည်, ချိုသောနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်သရုပ်ဖော်ပုံများ. သို့သော် abstraction အမျိုးမျိုးအဆိုပါစင်္ကြံသို့ဿုံ fit. ပညာရှင်တွေရဲ့ Feng Shui အားဖြင့်ဆိုရကဘာလဲ? သူတို့ရဲ့အကြံဉာဏ်ကို - ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင့်ကလေးအတွက်ကိုနားထောင်. နေရောင်၏ပြီးပြည့်စုံသောပုံရိပ် - သူအဝါရောင်အရောင် likes အကယ်., ရေ, etc - အပြာရောင်လျှင်. ဃ. အကြမ်းဖက်ခြင်းနှင့်တက်ကြွသောဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ Kid, ဆန့်ကျင်ဘက်လိုက်ဖက်ပန်းချီကားများ - တိတ်ဆိတ်, ပြောင်းလဲနေသောမဟုတ်. ပြောင်းပြန်: တိတ်ဆိတ်ကလေးက - လုံ့လရှိသူပုံရိပ်.
အဓိကပြဿနာများကိုတစ်ခုမှာအောက်ပါအချက်များကိုဖြစ်ပါသည်: စနစ်တကျအတွင်းပိုင်းထည်သို့ fit. ဒီနေရာတွင်ကစတိုင်ရွေးချယ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်, အသံ, နေရာမြေတပြင်လုံးအယူအဆနဲ့အညီရေးဆွဲရန်.
တိကျသောဥပမာကိုကြည့်ကြရအောင်. သင့်အိမ်ရဲ့မြေတပြင်လုံးစတိုင်တစ်ဦးဂန္ဇိမ်ခံဖျေါပွခကျြထဲမှာသတ်မှတ်လျှင်, ထို့နောက်သင်သည်မည်သည့်ဟောင်းပန်းချီကားများကိုဝယ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်, သို့မဟုတ်ဟောင်းသခင်၏အကျင့်. မြေတပြင်လုံးဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးရိုးရှင်းသောစတိုင်နေသူများကဖန်တီးမယ်ဆိုရင်သို့သော် - စပျစ်သီးကိုလက်ရာလုံးဝရီစရာကြည့်ရှုမည်. သဘာဝကျကျ, ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စရပ်များတွင်တစ်ဦးပန်းချီကားသို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သော Avant-garde ဖန်တီးမှုရုပ်ပုံဝယ်ဖို့လိုအပ်.
ဒါဟာအရောင်အစီအစဉ်မှသတိထားရမှာရကျိုးနပ်သည်. လိုက်ဖက်စွာပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုမည်, ပရိဘောဂနှင့်နံရံ၏အရောင်ကိုပဲ့ကြောင့်အရောင် palette. အတွင်းပိုင်းဟာအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအသှငျအပွငျရဦးမည်.
အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်း, အနုပညာ Nouveau စတိုင်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, အကြံပြုဖြည့်စွက်ပန်းချီ pastel.
တိုက်ခန်းသို့မဟုတ်ရုံးမဆိုသိသာဆောင်ပုဒ်သို့မဟုတ်စတိုင်အစိတ်အပိုင်းရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်ထည်ကိုရှေးခယျြ, အရောင်အာရုံစိုက်. အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှစ်ခုမျိုးကွဲရှိပါတယ်.
ပဌမ. တစ်ခုလုံးကိုအခန်းတစ်ခန်းတစ်ဦးကြားနေ palette ထဲမှာနေသူများကဖန်တီး. နောက်ထပ်, optional ကိုရုပျပုံ, တစ်ချိန်တည်းမှာကတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုတောက်ပအရောင်အသံထွက်ရှိပါတယ်. ပြီးတော့အတွင်းပိုင်း၏ကျန်ပုံရဲ့အရောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကပြည့်စုံစေသည်.
ဒုတိယ. အားလုံးဝုဏ်အတွင်းအပြည့်အဝကြေညာ, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအပါအဝင်. သာနောက်ဆုံးတစ်ပန်းချီမရွေး, မိမိအ palette တစ်ခုလုံးကိုအတွင်းပိုင်းကိုဖြည့်မယ်လို့. သို့သော်ဤ option ကိုပိုပြီးခက်ခဲသည်.
မြို့ရိုးကိုဒီဇိုင်းအနုပညာ - တစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကိစ္စ. ဒါဟာသတိပြုရကျိုးနပ်သည်, ပတ္တူပျော့တန်ချိန်၏လွင်ပြင်နံရံများမှာကြည့်ရှုမည်အထူးသဖြင့်စံပြအရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါနည်းလမ်းများနှင့်စတိုင်များအဘယ်အရာတည်ရှိနေကြသည်, အခန်းထဲမှာအာကာသအလှဆင်ဖို့ပန်းချီကားများ?
ဂန္. ဒီနည်းလမ်းရဲ့ဝိသေသတင်းကျပ်သောဖြောင့်လိုင်းများများမှာ. ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီနည်းလမ်းဂန္ထဝင်အတွင်းပိုင်းအတွက်မွေးရာပါဖြစ်ပါတယ်.
မှုတွင်. စတိုင်လ်၏အခြေခံ - frame ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုး.
Method ကို - "borderless". အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းလမ်း - ကအခြားပန်းချီကားများများ၏ဗဟိုဒြပ်စင်ပတ်ပတ်လည်စီစဉ်ပေးနေပါသည်. ဤနည်းအားဖြင့်အဓိကရုပ်ပုံလွှာခွဲဝေချထားပေးရန်.
ပန်းချီကားများကိုသာသင့်အိမ်အလှဆင်ဖို့အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်နာများပူဇော်. ဒါဟာနိုင်ပါတယ်: ပိုစတာ, ဓာတ်ပုံတွေ, ထုတ်, ကြေးမုံနှင့်အခြား.
စိန့်ပီတာစဘတ်ထဲမှာပန်းချီကားရောင်းရန်, အမိန့်မှဓာတ်ပုံများကို, အတွင်းပိုင်းပန်းချီ.
ပတ္တူစပေါ်ရေနံပန်းချီ၏စျေးနှုန်းများ. ပုံဆွဲများအတွက်စျေးနှုန်း, ဂရပ်ဖစ်, မင်, gouache, စက္ကူ, ပေါ့ပ်အနုပညာ, Avant-garde, ခေတ်ပြိုင်အနုပညာ, ပန်းချီဆရာ.
စြေး: မှ 15 000p. အချိန်: မှ2ရက်ပေါင်း
ငါ၏အမှု၏ဥပမာများ: ပန်းချီ | ရုပ်ပုံ | အစုစု
option ကိုတစျခု. အရောင် palette ပန်းချီအတွင်းပိုင်းအဘို့သင့်လျော်သည်, ဒါဟာအတွက်ဖျက်သိမ်းလျှင်အဖြစ်. အားလုံးအရောင်များ, အဆိုပါပတ္တူအပေါ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သော, ပုံထဲမှာရှိပါတယ်. ပတျဝနျးကငျြပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူညှိအတွက်အထည်အလွန်မကြာခဏပင်စိတ်ကူး. တခါတရံမှာပုံအခန်းများ၏အရောင် palette နှင့်အတူ link တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. အရှင်အခြေခံတာဝန်ပုံရိပ် - ထိုပျက်ပြယ်ကနေမြို့ရိုးကိုသက်သာရာရစေဖို့.
option ကိုနှစ်ခု. နောက်တဖန်အတွင်းပိုင်း၏အရောင်များ၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ပန်းချီ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုအပိုဆောင်းအရောင်များရှိပါတယ်. ထိုသို့သောနည်းလမ်းအခန်းထဲမှာလှုပျရှား.
တတိယ option ကို. အားလုံးပန်းချီကားများ, အခန်းထဲမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်သောဖြစ်ပါသည်, တောက်ပခြင်းနှင့်တက်ကြွသောအရောင်အဆင်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏, ငါအတွင်းပိုင်းလွှမ်းမိုး. သငျသညျတောက်ပ accents တွေနဲ့ပတ္တူပါကစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ, သည်အခြားပန်းချီကားများဖြည့်စွတ်ပံ့ပိုးကူညီဖြစ်စေဆက်စပ်ပစ္စည်း palette. ဤနည်းလမ်းကိုအတွင်းပိုင်းအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်သဟဇာတကြည့်ဖြစ်ပါတယ်, ကြားနေသို့မဟုတ်အမည်ခံကြားနေအရောင် created. တစ်ခုသာရုပ်ပုံရွေးချယ်ရာတွင်အားဖြင့်, သငျသညျအရောင်ရွှဲအာရုံစိုက်ရမယ်, အနုပညာအစိတ်အပိုင်း, အဆိုပါပတ္တူ၏မှတ်ပုံတင်.
ကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်, အထက်ပါအကြံပြုချက်များကြောင့်, သင်ကအိမ်၏အတွင်းပိုင်းအဘို့အညာဘက်ရုပ်ပုံကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်!